Ukwahlukaniswa Ukucindezeleka Refractometer, Surface Ukucindezeleka Polarimeter, Tin Side detector - Jeff
Yaqalwa ngo-2015 ngu-Jeff Li, Jeffoptics ilokhu ukuhlinzeka amadivayisi ekilasini lokuqala emhlabeni amakhasimende. Imikhiqizo zinezikhathi lesinqumo high, ngokushesha impendulo, eyizingqabavu futhi kulula ukusebenza. Sithunywe ukuhlinzeka kudivayisi professional, eqondile futhi kulula-operation amaklayenti ukwenza imikhiqizo yabo ukufinyelela nqampuna umhlabeleli.
Ngokusekelwe enkulu emakethe-China, Jeffoptics lunikezelwe ukukhonza ingilazi umkhakha, ukuhlinzeka kudivayisi umhlangano imfuneko iklayenti. Ukuthatha inzuzo ngokujulile ulwazi lobuchwepheshe kanye okuqinile Research & Development ukutshalwa kwezimali, Jeffoptics uye ekhiqizwa ezihlukahlukene Amadivayisi ingilazi ukucindezeleka nesilinganiso for ingilazi ukulawula izinga kuhlanganise imitha ukucindezeleka ebusweni, onqenqemeni imitha ukucindezeleka, ezinkulu imitha umbono ukucindezeleka, omnene ingilazi isihlonzi futhi abanenkani ifomu imishini yokuhlola nge deceleration nesilinganiso.
Abanolwazi futhi unothando interface yomsebenzisi umklami ukuxhumana design ngemuva.
Jeffoptics ezihlukahlukene amadivayisi ingilazi ukulawula izinga kuhlanganise ubuso imitha ukucindezeleka, onqenqemeni imitha ukucindezeleka, ezinkulu imitha umbono ukucindezeleka, omnene ingilazi isihlonzi futhi ...
Consulting Technical nokusekelwa
Jeffoptics inikeza ingilazi ukucindezeleka nesilinganiso namabhodlela izinga uhlelo lokulawula thintana nomphakeli sevisi. Siphinde futhi sinikeze R & D inkonzo ngoba imishini non-standard.
Kusukela ngafika emakethe, JF Series ingilazi ebusweni ukucindezeleka amamitha Sisetshenziswa tempering ingilazi isitshalo, onegunya isitifiketi nezikhungo futhi ...
JF-1 uchungechunge ingilazi ebusweni imitha ukucindezeleka
JF-2 uchungechunge Surface Ukucindezeleka Imitha
JF-3 surface UKUCINDEZELEKA imitha